About us - Xuzhou Sulong Wood Co., ltd
Xuzhou Sulong Izinkuni Co., ltd itholakale ku-2006, etholakala ePizhou City, esifundazweni saseJiangsu lapho ingenye yezindawo ezinhlanu zamapaneli eChina.
Ngaphakathi kwendawo engamamitha-skwele ayizinkulungwane ezingama-50, inolayini bomkhiqizo abali-10, okukhipha unyaka nonyaka kungama-cubic metres ayi-80,000.Kunezisebenzi ezingama-400 kufaka phakathi ochwepheshe abangama-60.
Okokusebenza kuthuthukile, amandla ezobuchwepheshe aqinile futhi nosayizi wemikhiqizo usuphothuliwe. Imikhiqizo yethu eyinhloko i-plywood ebhekene nefilimu, i-anti-slip ifilimu ebhekene neplywood, i-plywood elaminishwe.
Sithumele emazweni angaphezu kwama-30 futhi sithumele ngokuphelele. I-Xuzhou Emmet Import & Export Trading Co., ltd yasungulwa ngo-2015 ngezidingo zebhizinisi.
Sithatha ukuziqhenya okukhulu ngokunikezela ngemisebenzi esezingeni elifanele, esebenza kahle futhi enokwethenjelwa edlula okulindelwe ngamakhasimende ethu, ebanikeza lokho okuthenjisiwe. Silapha ukuzokhipha ingcindezi ekuphakamiseni nasezimisweni zayo. Ngakho-ke uma udinga ukwelulekwa ekusebenziseni kahle isabelomali sakho sokuphakamisa, sicela usishayele.
ISulong Plywood's QA Division yandisa inzuzo yakho ngo:
Ukwandisa ukusetshenziswa kabusha kweplywood
Ukwenza i-plywood ibe lula ukuyihlanza
Thuthukisa ukusebenza okungenamanzi kweplywood
Amalungu angaphezu kuka-10 aphezulu okuhweba epulangwe laseSulong azophikelela ekunikezeni insizakalo yobungcweti ukukusiza uhlele isampula lakho, umkhiqizo womkhiqizo omningi ngokuya ngemfuneko yakho.
UKUBA KHONA KWABASEBENZI